Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo kulankii u horeeyay la qaatay Guddoomiyeyaasha degmooyinka – STAR FM SOMALIA
Gudoomiyaha Gobalka Banaadir ahna Duqa Magalda Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa maanta kulankii u horeeyay oo isbarasho ahaa la qaatay Guddoomiyeyaasha degmooyinka iyo kuxigeenadooda.
Kulankan oo ka dhacay xarunta Gobolka Banaadir ayaa waxaa uu Guddoomiyaha cusub uu kula dar daarmay Guddoomiyeyaasha degmooyinka inay shaqooyinkooda ay sii laba-laabaan howsha ay bulshada u hayaan.
Guddoomiyaha ayaa sidoo kale kala hadlay in laga shaqeeyo arrimaha ammaanka, nadaafada iyo bilicda caasimada, waxaana uu mid mid u bogaadiyay Guddoomiyeyaasha degmooyinka oo uu xusay inay yihiin dhalinyaro aqoon leh.
Waxaa uu sheegay inuu wada shaqeyn dhow uu la yeelan doono Guddoomiyeyaasha degmooyinka, isla markaana degmo walba uu kormeeri doono.
Afhayeenka Gobolka Banaadir C/fataax Xalane oo gaba gabadii la hadlay saxaafada markii uu soo dhamaaday kulanka ayaa sheegay in kulanka uu la qaatay Guddoomiyaha Gobolka iyo Guddoomiyeyaasha degmooyinka uu ku soo dhamaaday jawi wanaagsan.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Jimcaale ayaa tan iyo markii uu Isniintii la wareegay xilka, waxaa uu kulamo la qaadanayay waaxyaha kala duwan ee maamulkiisa, waxaana uu kula dar daarmayay howlaha hor-yaala.